बैजनाथको समृद्धि, ‘प्राथमिकतामा विकास’ – Satyapati
शिक्षा र स्वास्थ्यजस्तो जनताको आधारभूत आवश्यकता देशैभर कमजोर स्थितिमा छ । यस अर्थमा बैजनाथको शिक्षा र स्वास्थ्य स्थिति अहिलेलाई नाजुक हुनु स्वभाविक हो । तर, हामीले कमजोर पक्षलाई निरन्तर सुधार गर्दै अघि बढिरहेका छौं ।
स्थानीय तह गठन भएको चार वर्षमा आफ्नो काम र प्रगतिबाट कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
स्थानिय तह स्थापना भएको चार वर्षको अवधिमा के कस्ता चुनौतीको सामना गर्नुभयो ?
कृषि र उद्योगलाई स्वरोजगारको आधार बनाउँछौँ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिँचाइ क्षेत्रमा गर्न बाँकी रहेका कामलाई प्राथमिकता दिएर सम्पन्न गर्नेछौँ । अबको बाँकी अवधिमा प्रत्येक वडा तथा बस्तीका घरधुरीमा विद्युत्को पहुँच पुगेको हुनेछ । प्रत्येक वडामा यातायात सञ्चालन हुने गरी सडक स्तरोन्नति तथा निर्माण गरिनेछ । हरसंभव सबै घरधुरीमा स्वच्छ खानेपानीको पहुँच बिस्तार हुनेछ । गाउँपालिकाको कार्यालय भवन, अधिकांश वडा कार्यालय भवन, स्वास्थ्य संस्थाका भवनहरु तथा विद्यालय भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेका हुनेछन् । कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण, विविधीकरण तथा आधुनिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धिसँगै कृषि उपजमा आत्मनिर्भर बनाई रोजगारी सिर्जना गर्ने र सेवा प्रवाहलाई जनमुखी, पारदर्शी र मितव्ययी बनाइनेछ । समग्रमा बैजनाथलाई एउटा समृद्ध गाउँपालिकाको रुपमा विकास गर्ने सपना बोकेर हिडेका छौं ।